Hub Aruurin ka bilowday Muqdisho | Gedoonline
Hub Aruurin ka bilowday Muqdisho	Added by Editor on August 10, 2012.Saved under Latest News	MUQDISHO(GMN)-Wasiirka Difaaca Dowladda Soomaaliya Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in Magaaladda ay ka bilaaween hub ka dhigis.
Carab ayaa tilmaamay in talaabadan ay ugu gol leeyihiin sugista ammaanka Magaaladda Muqdisho.
Xuseen ayaa ku biiriyey hadalkii madaxwayanaha in aan la ogoleyn in la siyaasadeed ciidamadda Dowladda
Wasiirka difaaca ayaa ugu baaqay shacabka inay shacabka ay ku soo wargaliyaan ciidamadda dadka ka qayb qaadanaya falalka ammaan daro.
10-Maalmood keliya ayaa inaga xigta in Dalka lagu qabto doorasho Madaxtinimo.
Carab oo sheegay in Marka iyo Jowhar fooda ay ku hayaan
Carab:Ku Hanjabay in gacan bir ah lagu qaban doono Afgooye
Xusseen: Dowladda Guul ayay gaartay
Hawlgal ka dhacay Muqdisho